NFT: Tilmaamaha Dhameystiran ee Helitaanka 100x Xiga! - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » NFT: Tilmaamaha Dhameystiran ee Helitaanka 100x Xiga!
Tag: Blockchain, Naadiga daanyeerka ee lagu caajiso, cryptopunks, ERC-20, ERC-721, NFT, Naadirka, Qandaraasyada smart, VeeFriends
Waqtiga akhriska: 12 minuti
Yaa aan rabin inuu sameeyo x50 ama x100 oo leh maalgelin NFT?
Si kastaba ha noqotee, waxay noqotaa mid aad uga sii adag marka loo eego cryptocurrencies, sababtoo ah waxaa jira dhowr arrimood oo gaar ah oo la xidhiidha adduunka NFT-yada oo aan laga helin hantida kale. Si kastaba ha ahaatee, aan isku dayno maanta si aan u ogaano sida aad gacmahaaga ku heli karto jeexan dhif ah ka hor dadka kale.
Miyaan halkan ku sheegnay cazoo inaanan ahayn lataliye dhaqaale, oo aanan haysan wax shahaadooyin ah oo aan qofna ku siiyo talo ku saabsan sida ay lacagtooda u maalgashadaan? Hagaag, waan ku celinayaa. U akhri khadadkan kaliya sida dukumeenti waxbarasho oo NFT ah, wax kale ma aha. Maalgashiyadu aad iyo aad bay khatar u yihiin.
Aan u galno tan sida loo helo NFT-yada naadir ah.
Raac liiska hubinta
Liiska hubinta 1: Art
Liiska hubinta # 2: Waxa laga raadiyo NFT: naadir
Liiska hubinta 3: Kooxda Aasaaska
Liiska hubinta 4: Roadmapka
Liiska hubinta no. 5: bulshada
Liiska hubinta no. 6: qiyaasta ganacsiga ee blockchain
Bishii Sebtembar 2021, Sotheby's waxay xaraashtay ururinta 107 nooc oo daanyeer ah, oo loo yaqaan "101 Bored Ape Yacht Club", waxayna ku iibisay qiimo waalan oo dhan $ 24 milyan. Maxaa ka dhigaya daayeerrada caajiska ah si aad u qiimo badan? Way mudan tahay in la qodo sababtoo ah waa tusaale weyn oo ah waxa ay tahay inaad si fiican u foojignaato markaad shabagga ka raadinayso si aad u hesho mashruuc NFT ah oo diyaar u ah inuu qarxiyo.
Aynu falanqeyno ururinta daayeerrada caajiska ah anagoo raacayna 6-da mabaadi ee aasaasiga ah ee aan maskaxda ku hayo markaan samaynayo cilmi-baaris ku saabsan NFTs.
Ama sida aan jeclahay inaan ugu yeero, ATsRCMt, oo si fiican ugu qulqulaya carrabka.
Kuwani waa sifooyinka aan raadiyo mar kasta oo aan baranayo ururinta NFT cusub ama xitaa ururinta NFT ee hore loo yaqaan. Baadh dhinacyadan sidoo kale, waa aasaas, mar walbana maskaxda ku hay in sida adduunka crypto aysan jirin wax ku siinaya wax dammaanad ah. Had iyo jeer samee cilmi-baaristaada ka hor intaadan jacayl u qaadin ururintii ugu dambeysay ee ka soo muuqatay quudkaaga Twitter.
Haddii aan tusaale u soo qaadano ururinta daanyeerka, 5-tan mabda'a dhamaantood si buuxda ayaa loo qaatay.
Marka laga eego dhinaca farshaxanka, daanyeerkani maaha sida saxda ah ee aad filayso inaad ku aragto shaqada farshaxanka, ma aha Monet, ma aha Picasso, laakiin waxay weli muujinayaan qaab-dhismeedkooda, qurxinta iyo tayada dhabta ah ee tayada, sifooyinka iyo hantida.
Ururintan 10.000 walxood waxay leedahay in ka badan 170 sifooyin aan beddelmi karin kuwaas oo si aan kala sooc lahayn loo doortay oo loo xilsaaray daayeer kasta oo NFT ah markii ururinta la sameeyay horraantii 2021.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah avatar-yadaan daanyeerka ayaa leh muraayadaha qorraxda ama dhegaha bunny, kuwa kalena waxay leeyihiin shabeel ama dhogorta qaansoroobaad, qaar kale waxay sigaar cabbaan oo cunaan pizza ama xitaa waxay ka toogtaan alwaaxyada laysarka ee indhahooda. Shinni kale waxay leedahay sigaar afka ka laadlaadsan ama xataa indhaha cas ee qof si qoto dheer loo dhagxiyey. Laakiin waxaan leeyahay, waxyaalahan ma kuwa abuura shaqo farshaxan? Fikradda ayaa ah tan: dhammaanteen waan ku heshiin karnaa in farshaxanku yahay arrin macquul ah oo cajiib ah, laakiin adduunka NFT muuqaal farshaxan ayaa laga helay ururintaas kuwaas oo leh tiro badan oo astaamo naadir ah iyo astaamo asal ah.
Tani waxay inta badan sabab u tahay xaqiiqda ah in ururinta alaabooyin badan iyo tayada hoose ee sifooyinka AI ee gaarka ah ay ku dhibtoonayaan inay soo saaraan hal shay oo leh sifooyin gaar ah. Xisaab ahaan waa isla'egid fudud: ururinta 20.000 oo shay laakiin wadartoodu tahay 20 astaamood oo gaar ah, waxay ka koobnaan doontaa shay badan oo wadaaga sifooyin isku mid ah ama mararka qaarkood xitaa isku mid ah, taas oo yaraynaysa suurtogalnimada walxaha dhifka ah ee ku jira ururintaas oo asal ahaan xaddidaya jaanisyadooda ee dhalin yarida.
Sidaad u badan tahay inaad horeba u qiyaastay, marka ay timaado ururinta sawirada astaanta sare, oo sidoo kale loo yaqaan PFP (oo la soo gaabiyo Photo for Profile, aka profile picture), naadirka ayaa gabi ahaanba lama huraan ah.
Dabcan marka aan ka fikirno naadirka fannaanka soo jireenka ah waxaan ka fikirnaa van Gogh Starry Sky, Laakin NFT-yadu waxay qaateen fikradda naadirnimada heer cusub oo dhan. Dunida casriga ah ee calaamado aan fungi karin, naadirka qasab ma aha hanti laga dhex helay shaqada fanka ee dareenka dhaqameed ee ereyga.
Dhab ahaantii waxaa jira farshaxanno soo saaray ururinta kuwaas oo leh qaab farshaxan oo si fiican loo qeexay: mid ka sarreeya, ururinta Fidenza ee Tyler Hobbs.
Kalsoonida uu leeyahay Tyler Hobbes
Fidenza waa fikradda Tyler Hobbs, 34, oo ka tagay shaqadiisa injineernimada kombuyuutarka si uu ugu shaqeeyo farshaxan waqti-buuxa ah. Wuxuu bilaabay inuu sameeyo ETH markii uu ogaaday Jidadka Farshaxanka, madal faneed abuurta NFT-yada ku salaysan fanka wax-soo-saarka, oo noqday farshaxan la soo xulay.
Inta badan ururinta PFP ee Openea ee ku jirta moodada maanta ma aha farshaxan gabi ahaanba.
Waa suurtogal in la sameeyo isbarbardhig oo la tixgeliyo kuwan NFT avatars ee aadka u qaaliga ah iyo sidoo kale kaadhka la ururin karo ee albamka baseball ama albaabka kubbadda cagta Panini. Si la mid ah sida aan u aragno naadirka kaararkan ganacsi ee gaarka ah, NFT-yada gaarka ah qaarkood ee ku jira ururin gaar ah ayaa loo tixgaliyaa inay yar yihiin sidaas darteedna ay ka qiimo badan yihiin kuwa kale. Laakiin waa maxay sababtu? Caadi ahaan waxaa sabab u ah sifooyin gaar ah ama hanti dhab ah oo ay iyagu leeyihiin oo ka diiwaan gashan blockchain. Tusaalooyinka qaar? Indhaha leysarka ee daayeerrada caajiska ah, punk shisheeye ee Cryptopunk, wejiyada TV-ga ee bisadaha Cool ama bisadaha Gen 0 ee Cryptokitties.
Cazoo, aan u dhaadhacno ganacsiga! Sidee ayay suurtogal u tahay in la ogaado oo la fahmo naadirka hoos u dhaca NFT ee soo socda?
Qaar badan oo ka mid ah kuwa wax soo ururiya waxay u badan tahay inay igu raacsan yihiin in naadirka NFT wali waa mid ka mid ah sifooyinka ugu adag ee lagu garto ururin kasta, gaar ahaan haddii ay tahay mid cusub, laakiin maadaama dhammaan NFT-yada lagu kaydiyo laguna maareeyo blockchain ... waxaad rabtaa inaysan jirin qalab noo ogolaanaya inaan helno faham dheeraad ah oo ku saabsan. Astaamaha ururinta aynu eegayno?
Mid ka mid ah qalabka aadka loo isticmaalo waa naadirka.qalabka, shabakad si buuxda ugu heellan kala soocida farshaxanka curinta iyo ururinta NFT oo ku salaysan naadir, sidaas awgeed magaceeda. rarity.tools ayaa bixisa dulmar ku saabsan sifooyinka iyo sifooyinka ku jira ururin gaar ah waxayna u ogolaataa hanti-hayayaashu inay hubiyaan naadirka NFT-yadooda gaarka ah.
Laakiin kaliya maaha! Waxay ku guulaysteen inay dhaliyaan muuqaal kasta (mid kasta sifo, sifo kasta oo gaar ah) ee NFT kasta, waxayna ugu yeedheen dhibcaha naadirka ah. Dhibcaha naadirka ah ee dhammaan sifooyinka NFT ayaa la isku daray si loo soo saaro waxa cabbirka naadirka ah ee NFT iyadoo la tixgelinayo. Aad u xariif ah… halkan waxaa ah warbixin degdeg ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso: waayo go'aami natiijada naadirka Sifooyin gaar ah, madalku waxay qaadataa tirada astaamaha la tixgeliyo, kiiskan mid keliya, wuxuu u qaybiyaa tirada guud ee walxaha leh sifadaas ka dibna u qaybisa mar kale tirada walxaha ku jira ururinta. Qaacidadan fudud waxay soo saartaa dhibcaha naadirka ee sifadaas gaarka ah si aan u helno guud ahaan buundada naadirka NFT ee aan tixgalinay, rarity.tools ayaa si fudud isu geynaya dhammaan buundooyinka sifo kasta.
Tusaale dhibcaha naadirka ah ee daayeer caajisay
Madalku wali waxa uu leeyahay muuqaal cajiib ah: waxa ay siisaa isticmaalayaasha un kalandarka oo qeexaya dhammaan dhibcaha NFT ee soo socda, aad ugu habboon in aad ka yara dhaqso badan tahay kuwa kale oo aad u fiirsato mashaariicda NFT ee la saadaalinayo mustaqbalka dhow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la xasuusto in dareenka weyn had iyo jeer la bixiyo: xaaladda hadda jirta waxaa jira daraasiin mashruucyo cusub toddobaad kasta iyo bixinta suuqa ayaa si daacad ah u koraysa heer aan la sii wadi karin. Kaliya tiro aad u yar oo ka mid ah ururinta la bilaabay 2021 ayaa badbaaday mustaqbalka fog. Oo waxaan ula jeedaa ZERO. Had iyo jeer ka digtoonow tan.
Hab kale oo wanaagsan oo lagu akhriyo naadirka wax la ururiyo waa iyada oo la falanqeeyo cabbirkeeda qaybta Openea Properties.
Guryaha NFT ee Openea
Halkan ururin kasta oo ku taxan suuqeeda, Openea waxay qeexi doontaa soo noqoshada sifooyin kasta oo naadir ah oo NFT-yada ku jira ururinteeda. Tani waxay si dhab ah u ogolaanaysaa iibsadayaasha suurtagalka ah inay qiyaasaan naadirka shayga ururiyaha ee ay xiisaynayaan iyaga oo aan marin xaddi badan oo qotodheer iyo cilmi baaris aan dhamaad lahayn.
Diirada ugu weyn ee halkaani waa in laga dhigo mid sahlan oo la iska yareeyo hantida - sida fiirinta guryaha ciyaaryahanada ee Fifa.
Markaad raadinayso alaab naadir ah oo ku dhex jirta ururin gaar ah waxaad dooneysaa inaad raadiso kuwa NFT-yada ah ee haysta guryaha ugu gaarka ah iyo kuwa yar, maadaama loo tixgelin doono kuwa ugu qiimaha badan. Sax? Haa. Markaad raadinayso NFT mustaqbalka, naadirka waa inuu noqdaa mid ka mid ah yoolalkaaga aasaasiga ah.
Talaabada xigta ee liiska hubinta marka ay timaado cilmi baarista mashruuca waa in aan si fiican u baaro kooxda aasaasay.
Had iyo jeer maaha mid toos ah sida ay u muuqato in dib loogu noqdo cidda maskaxda ka dambeysa mashruuc gaar ah, sababtoo ah qaar ka mid ah aasaasayaasha xitaa mashaariicda caanka ah sida Bored Ape Yacht Club, tusaale ahaan, weli way aamusan yihiin illaa iyo inta aqoonsigooda dhabta ah ay khuseeyaan. .
In kasta oo qarsoodiga guud ahaan loo tixgeliyo calan casaan ah oo dhammaystiran oo ku yaal adduunka crypto, Naadiga caajiska ee Ape Yacht Club waa wax ka baxsan sharciga sababtoo ah inkasta oo aan la aqoonsanayn kooxdu waxay ku guulaysatay inay abuurto mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'NFT'.
Kooxaha aasaaska ahi waxay si cad u sheegi karaan cidda ay yihiin, doorarka ay ka ciyaaraan horumarinta mashruuca iyo khibradahooda shaqo ee kala duwan. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu habboon waa VeeFriends, mashruuc NFT ah oo uu aasaasay oo uu hoggaamiyo ganacsade caalami ah oo la aqoonsan yahay Gary Vaynerchuk, oo sidoo kale loo yaqaan Gary Vee. Awood u lahaanshaha in lagu xidhiidhiyo mashruuca aasaase si fiican loo yaqaan (ama kooxda aasaasayaasha) waxay si dabiici ah u kordhisaa kalsoonida mashruuca lafteeda, waxayna siisaa kalsoonida kuwa haysta NFT ee ururintaas oo ku saabsan maalgashigooda. Intaa waxaa dheer, haddii aasaasayaasha mashruuca ay horey u lahaayeen saldhig weyn oo isticmaale bulsheed, sida tusaale ahaan Gary Vee, kalsoonida mashruuca NFT ayaa kor u kici karta. Haddaba, haddii ay suurtogal tahay, waxaad u baahan tahay inaad eegto kooxda aasaaska u ah si aad u qiimeyso inay awood u yeelan doonaan oo ay u kicin doonaan si ay u koraan mashruuca iyo in ay jirto fursad weyn oo ay ku fulin karaan ballanqaadkooda.
VeeFriends ee Gary Vaynerchuk
Talaabada saddexaad: Roadmap-ka.
Sida ku dhawaad ​​dhammaan mashaariicda ku jira nidaamka deegaanka fungible token, mashruuc kasta oo aan fungible (NFT) wuxuu u janjeeraa inuu u soo bandhigo maalgashadayaashiisa khariidad waddo, iyo marka laga eego aragtida aragtida mashaariicda fungible iyo non-fungible token waxay wadaagaan isku mid, marka kuwan Waa khariidaddooda gaarka ah, kuwa dambe waxay u janjeeraan inay ku daraan muuqaal farshaxan oo go'aansan si ay u sheegaan ujeedooyinka mustaqbalka ee mashruucooda, shuraako, dhibco hawo iyo sidoo kale utility DeFi dhawaan.
Khariidad daanyeer ah oo caajistay, muuqaal cajiib ah iyo hal abuur leh
Tani had iyo jeer may ahayn kiis: ka hor intaan loo kicin NFTs ee 2021, mashruucyo NFT aad u yar ayaa soo bandhigay khariidad waddo: Cryptokittens iyo Cryptopunks, oo markii ugu horreysay la sameeyay 2017, waxay lahaayeen ujeeddada kaliya ee tijaabinta qaabka cusub ee ERC-token. Ethereum blockchain, ma aha mashruuc dhab ah oo mustaqbalka fog ah.
Khariidadda ugu caansan ee xilligaan la joogo waa kan Naadiyada Doonyaha Daanyeerka ah ee caajiska ah, fikradahoodu waxay dhiirigelisay mashruucyo kale oo badan si ay u noqdaan kuwo hal abuur leh oo cusub mustaqbalkooda.
Sida mashruuc kasta oo loo yaqaan 'crypto', sida Cardano, Polkadot, Solana ama Luna, akhrinta khariidadda mashruuca waa mid aad muhiim u ah in la isku dayo in la aqoonsado korriinkooda mustaqbalka fog iyo in la qiyaaso horumarka soo socda.
Ilaa hadda, mashaariicda ku riyaaqay kobaca ugu weyn waxay ahaayeen kuwa siinaya kuwa haysta NFT-da ( haystayaasha, jargon) oo leh qiimeyo dheeraad ah, si joogto ah, laga bilaabo maalinta koowaad. Maxay yihiin qiimayaashan lagu daray? Kuwani waxay noqon karaan hawo-qaadyo NFT oo bilaash ah oo si toos ah ugu jira boorsooyinka haystayaasha, ERC-20 token airdops, NFT mashruuc mashruuc si ay u dhaliyaan dakhli dadban, "faa'iidooyinka xubinnimada", ka hor inta aan kuwa kale bilaabin NFT kale, galaangal gaar ah oo loo yeesho qaar ka mid ah Launchpads, iyo xitaa marin gaar ah. bakhaaradooda ganacsi.
Kuwani waa laga yaabaa inay yihiin qaar ka mid ah sifooyin badan oo "la jecel yahay" in laga dhex raadiyo khariidad mashruuc, laakiin waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in ilaa kooxda horumarinta ay caddeeyaan in ay fulinayaan waxyaabihii ay ballanqaadeen, khariidadu sida ay tahay maaha wax kale, dhab ahaantii. , ballan. Digtoon, had iyo jeer ka digtoonow, gaar ahaan haddii mashruuca laga hadlayo hadda la sameeyay oo uu ku jiro marxaladaha hore ee horumarintiisa.
Taasi waxay tidhi haddii mashruuca NFT ee aad isku dayayso inaad gasho soo bandhigo qaab farshaxan oo xiiso leh oo si uun u dhab ah, haddii ay leedahay qaddarka lagama maarmaanka ah ee sifooyinka gaarka ah si ay u soo saarto xoogaa naadir ah, oo ay muujiso calaamado cad oo ah koox aasaasi ah oo qiimeeya bulshadeeda. iyo sidoo kale khariidadisa, markaa fursadaha mashruucaas lagu guulaysan karo mustaqbalka fog ayaa aad uga weyn mashruuc aan lahayn qaar ka mid ah shuruudaha lagu sheegay.
Qaar badan ayaa ku dooda in tallaabadan xigta ay tahay tan ugu habboon dhammaan: bulshada.
Shakhsi ahaan, anigu si buuxda uguma qancin in qiimaha ururinta NFT ay gebi ahaanba ku tiirsan tahay bulshadeeda, si kastaba ha ahaatee waxaan garowsanahay in ay shaki la'aan kaalin muhiim ah ka qaadato abuurista mashruuca iyo horumarinta joogtada ah labadaba.
Habka ugu waxtarka badan ee aan ku helay si aan u helo faham wanaagsan oo ku saabsan sida ay u xooggan tahay bulshada mashruucu waa in si firfircoon loola xiriiro kanaalada rasmiga ah ee mashruuca, gaar ahaan warbaahinta bulshada, sida Twitter, Telegram, Instagram ama ay u badan tahay Discord. .
Marka ugu horeysa ee aad la kulanto ururinta Openea ama suuq kasta oo kale oo NFT ah horumarka ugu dabiiciga ah ee halkaas ka socda waa inaad hubiso soo socda iyo heerarka ka-qaybgalka Twitter iyo Discord. Tani waxay sabab u tahay laba sababood: marka hore sababtoo ah waxaynu weli ku jirnaa curdanka wareegga nolosha ee NFTs oo aan weli si buuxda u horumarin nidaamkooda deegaanka ilaa heer ay awood u yeeshaan in ay kiciyaan mugga ganacsiga ee qaababka maaliyadeed, tusaale ahaan iyaga oo ka faa'iideysanaya amaahda iyo dammaanadda Hantida, iyo tan labaad sababtoo ah, si mashruuca NFT looga dhigo mid waxtar leh marka laga eego dhinaca maalgashiga, bulsho bulsheed oo ballaaran, ka go'an oo firfircoon ayaa iyaduna noqon doonta suuq ay ku iibiyaan NFT-yada laftooda. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay hantidooda asalka ah ee ahaanshaha shaqada farshaxanka, NFTs wali waxay sii ahaanayaan xayawaan bulsheed, waana inay ugu horrayn ku koraan dareenka warbaahinta bulshada.
Natiijo ahaan, haddii aad aragto akoon Twitter ah oo mashruuc ah oo si aan macquul ahayn u koraya dhowr toddobaad gudahood, waxaa suurtagal ah in ururiyeyaashu ay horumariyaan aaminsanaanta in mashruucaas gaarka ah uu aadi doono waddo dheer, oo ay u badan tahay in baahida NFTs gudaha. ururin gaar ah ayaa laga yaabaa inay kor u kacdo.
Qiyaasta warbaahinta bulshada marka laga reebo, waxaa laga yaabaa inay sidoo kale mudan tahay in la hubiyo sida bulshadu u dhaqmo oo ay ula falgalaan Twitter iyo Discord, tusaale ahaan haddii sheekadu ay had iyo jeer daaran tahay oo aysan waligood seexan waxay hubaal ahaan noqon kartaa calaamad wanaagsan oo xoogga ah. Iska hubi inaad indhahaaga diirran tahay markaad quusinayso mashruuca Discord.
Si fudud marka la falanqeeyo cabbirrada warbaahinta bulshada ee mashruuc cusub, qofku wuxuu heli karaa fikrad dhammaystiran oo ku saabsan baahida mustaqbalka ee NFT ee mashruucaas uu yeelan doono: inta badan waa istaraatijiyad guuleysata marka la maalgashado NFT-yada inta lagu gudajiro shaqadooda, abuurkooda, sababtoo ah Marxaladdan qiimaha waxay ku dhow yihiin 0,05 ETH iyo 0,08 ETH taas oo farsamo ahaan loo qoondeeyey inay noqoto qiimaha ugu hooseeya.
Iibsashada NFT marka la soo saarayo, markaa abuurkeeda, waa nidaam la mid ah ka-qaybgalka ICO, bixinta qadaadiicda bilowga ah, iyo sida caadiga ah faa'iidooyinka ayaa ka miisaan badan khasaarooyinka: iibsashada NFTs "qiimaha sagxada" ee farsamadiisa, laga bilaabo ururinta in waxa uu helay xadi mug leh oo dano bulsheed ah, ka dibna waxa ay dhalin kartaa baahi dheeraad ah oo loo qabo mashruucaas NFTs ee suuqa sare sidoo kale.
Si kastaba ha noqotee, waa inaan sheegaa in iibsashada NFT ee mininging ay tahay mid aad u tartan badan, sidaa darteed halkan sidoo kale waa inaan si taxaddar leh u sii wadnaa: khidmadaha gaaska, guddiyada, waxay noqon karaan kuwo sarreeya mana jirto dammaanad qaadka helitaanka NFT.
Waxaan gaadhnay tallaabadii u dambaysay ee liiska hubintayda, laga yaabee qaybta ugu xiisaha badan: cabbirka ganacsiga.
Ka dib markii la gaaro gabagabo macquul ah oo ku saabsan khariidadda kooxda fanka, mashruuca iyo bulshada la falgalaya, qodobka ugu dambeeya ee u baahan in wax laga qabto waa sarrifka, ganacsiga, cabbirada ururintaas gudaha blockchain. Ma adkeyn karo ku filan muhiimada qodobkan sababtoo ah cabbirada ku jira blockchain waxay u oggolaanayaan inay si wax ku ool ah u go'aamiyaan xiriirka ka dhexeeya sahayda iyo baahida gudaha ururin gaar ah iyo sidoo kale u oggolow in si firfircoon loo qiyaaso naadirka NFT hal dhibic. oo ka soo horjeeda mid farshaxan oo keliya.
Habkani wuxuu si cad u caddaynayaa inuu waxtar badan u leeyahay ururinta NFT ee leh qadar aad u badan oo ah xogta sarrifka ee blockchain, tan iyo waxa kaliya ee aan falanqeyn karno waa taariikhda macaamil ganacsi iyo tirada guud ee dadka haysta.
Tilmaanta ugu horraysa: marka aad hesho ururin si togan uga jawaabaya dhammaan jeegaggii aan soo sheegay, waxaad doonaysaa inaad hubiso in tirada NFT ee ururintaas ay dheelli tiran tahay oo ay la siman tahay wadarta guud ee hantida ururinta. Taasi waa, haddii wadarta guud ee sahayda ururinta ay tahay 10.000 NFTs oo ay jiraan 5.000 milkiileyaal shakhsi ah, waxaan ku jirnaa xaalad caafimaad qabta oo ku habboon, maaddaama celceliska saadka / saamiga haysashada uu yahay laba NFTs qofkiiba. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jiraan, tusaale ahaan, 10.000 oo walxood oo ururin ah laakiin waxay u qaybsan yihiin 500 milkiileyaal shakhsi ah, saamiga u dhexeeya bixinta iyo celceliska haynta waa 20 NFT qofkiiba. Xisaab ahaan waxaan akhrinay dheelitir la'aanta xooggan ee xiriirka ka dhexeeya saadka iyo baahida.
Muuqaalkan mala-awaalka ah, dadka haysta 20 ama in ka badan oo NFT ah waxay si fudud suuqa ugu soo qulquli karaan iyagoo iibinaya gabalkooda, taasoo keenaysa qiimaha xaraashka aasaasiga ah ee NFT-yada ururinta inay dumaan (qiimaha dabaqa). Shuruucda saadka iyo baahida waa in mar walba maskaxda lagu hayaa sababtoo ah waxay khuseeyaan suuqa NFT laga yaabaa in ka badan wax kasta oo kale. Maxaan raadinaa markaa? Raad ururintaas saxaysa dhammaan sanduuqyada ku jira liiskayada hubinta kuwaas oo leh dalabka NFT ee ugu hooseeya ee suurtogalka ah iyo tirada ugu badan ee mulkiilayaasha iyo iibsadayaasha. Isku soo wada duuboo, cabirradan ayaa si aad ah u qeexaya sahayda hoose ee ugu habboon iyo xaalad baahida sare ee aasaasiga ah taas oo u oggolaanaysa ururinta in ay sii ahaato mid deggan haddii aanu kor u kacayn qiimaha saldhiga.
Nimanyahow, guud ahaan NFT-yadu waa sixir iyo soo jiidasho leh, laakiin waxaa jira wax badan oo la baranayo ... suuqa NFT guud ahaan wuxuu soo saaray dhowr 100x iyo 200x 2021 oo keliya, waxaanan hubaa inay sii wadi doonto fulinta ballanqaadyadeeda si ay u keento. korsada hore ee dayaxa. Tirada sida xawliga ah u koraysa ee ururinta cusub ee soo baxaysa maalin kasta waxay iga dhigaysaa inaan u malaynayo in suuqa iyo rabitaanka cuntada ee NFTs ay u badan tahay inay dejiyaan xoogaa mustaqbalka dhow, laakiin inta lagu jiro wakhtigan haddii aad heli karto NFT aad u fiican. in aad runtii rabto in aad yeelato
Maqaalka horeWarbixinta NFT: 2021 waa sanad kobac weyn
Maqaalka xigtaHalbeegyada lagu tixgaliyo gadashada iyo iibinta NFT-yada